Kubadda cagta iyo dhalinyaradda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kubadda cagta iyo dhalinyaradda
Fotboll störst när ungdomar idrottar
La daabacay torsdag 15 juli 2010 kl 10.57
Dhalinyaraddu marka ay timaado ciyaaraha fudud iyo guud ahaan isboortiga oo dhan waxaa ugu weyn oo ay xiiseeyaan kubadda cagta oo lambarka koowaad u ah. Farqiga u dhaxeeya haddaba dhalinyaradda ajanabiga ah iyo kuwa wadanka u dhashay ee arrimahaasi u janjeera ayaa ah ciyaarta kubadda koleyga iyo fardo fuulka.
Baaritaan amuurtaas la xirriirta oo la sameeyey ayayaa lugu sheegay in dhalinyaradda ciyaaraha ku mashquulsan ay xiiseeyaan kubadda cagta, kuwaasina 71% ee xiiseeya kubadda cagta ay yihiin dhalinyaradda ajnabiga ah.
Dhanka dhalinyaradda wadankan u dhashay ayaa taas cagsigeeda waxaa la sheegay iney waqtiga geliyaan ciyaarta loo yaqaano Innebandy, halka ciyaaraha loolanka ah iyo kubadda koleygana ay xiiseeyaan wiilasha ajanabiga ah. Sadex jibaar gabadhaha iyagana xiiseeya isboortiga ayey warbixintaasi baaritaan sheegtay iney jecel yihiin ciyaarta baasket-ka ama kubadda koleyga, halka gabdhaha dalkan u dhashay ay iyagana jecel yihiin fardo fuulka.
Dhalinyaradda oo xiiseeya kubadda cagta